PressReader - Ilanga: 2017-10-02 - KUZODOTSHWA ABATSHALI-MALI
Ilanga - 2017-10-02 - Izindaba - THANDEKA NGOBESE
UFUNGA uyagomela uMnu Cyril Ramaphosa oyisekela-mengameli le-African National Congress (ANC) nezwe ukuthi lizogaya ngomunye umhlathi emuva kwengqungquthela yokukhetha ubuholi baleli qembu ngoZibandlela (December) nonyaka.
Lokhu ukwenze izolo ethula inkulumo kuvalwa ingqungquthela obekukhethwa kuyona ubuholi be-ANC e-Eastern Cape ebiseEast London Internationa Convention Centre. “Ngemuva kwale ngqungquthela (yangoZibandlela) isimo sezomnotho kumele sishintshe. Imigomo ethile kumele ishintshwe ukuze sidobe abatshalimali ukuba basondele bazoyitshala eNingizimu Afrika kuthi labo asebelahle ithemba ngayo babuyelwe wukuyethemba.
"Yingakho kubalulekile ukuba siye kuyona sibumbene njengoba osomabhizinisi beyibheke ngamehlo abomvu, osopolitiki beyibhekile, abaholi bezenkolo beyibhekile nathi uqobo siyibhekile. Le nto esiyibonile komabonakude kundiza izihlalo abantu belwa kule ngqungquthela (yase-Eastern Cape), kumele iphele ngoba ithumela umyalezo ongemuhle wokuthi i-ANC ilwa yodwa.
"Izigameko ezinjena kumele singaphinde sizibone ikakhulukazi njengoba sibheke engqungqutheleni kaZibandlela,” kusho uMnu Ramaphosa. Le ngqungquthela ibise-Eastern Cape, iphele sekuchitheke igazi emuva kokuba amalunga e-ANC eshayane ngezihlalo kubangwa ukuthi kukhona abangene ngopotsho kuyona.
Kulimale izithunywa eziyisi-8 eziphuthunyiswe ezibhedlela zilimele kanzima. Kunohlangothi obelufuna uMnu Phumulo Masualle abuyiselwe esikhundleni sokuba ngusihlalo wesifundazwe, ngakolunye uhlangothi kukhona obelweseka obengunobhalo, uMnu Oscar Mabuyane ( osesithombeni), ukuba kube nguyena othatha esokuba ngusihlalo. Ugcine enqobile uMnu Mabuyane. Indaba iqale ngoMgqibelo ebusuku sekuzoqala ukhetho, kuzwakale izithunywa zixokozela ngemuva zikhala ngokuthi zishaywa ngezihlalo ngabebeseka uMnu Mabuyane.
Esinye isithunywa esithathwe ngabezimo eziphuthumayo sopha, sishaywe ngombhobho wokukhuluma ebusweni. Okhulumela i-ANC e-Eastern Cape, uMnu Mlibo Qhoboshiyana, uthe uthuthuva lususwe ngamalunga abethamele ingqungquthela abethi kukhona amagatsha asevele athi qhamu thushu engqungqutheleni kodwa engakaze aye emihlanganweni yamagatsha lapho kusuke kuphakanyiswa khona amagama alabo afuna abamele.
“Ngemuva kwalo msindo, sibe sesiphakamisa ukuba izithunywa zibhekwe ukuba zikufanele yini ukuba kule ngqungquthela. Amanye amalunga kawazange ayizwe leyo aqala abanga umsindo ecula amaculo. Lokhu kucula kwawo kuthathe amahora amabili kuya kwamathathu. Sithe sibona kwaba sekundiza izihlalo, abantu bethuka basuka ngejubane beza ngaphambili,” kusho uMnu Qhoboshiyane.
Uthi amalunga esigungu esiphezulu se-ANC abejutshwe ukuyoqapha ingqungquthela, bebelindele ukuthi azonika umhlahlandlela kodwa kwangenzeka. UMnu Bheki Cele ongelinye lamalunga esigungu esiphezulu abejutshiwe, uthe ubesakhuluma namaphoyisa nge- muva kwesiteji ngesikhathi kuqala lolu thuthuva. "Ngibone ngabantu beza ngakithina, amaphoyisa azama ukungivikela ethi mangilale phansi, ngenqaba,” kusho uMnu Cele. Izithunywa ebezithamele le ngqungquthela zisola ilunga lesigungu esiphezulu, uMnu Andile Lungisa nonobhala wesifunda aMathole, uMnu Teris Ntutu ngokuxova ingqungquthela.
Esinye isithunywa esale saphetha negama laso, sisola laba ngokuxova yonke into ngesikhathi bezama ukuchitha zonke izithunywa ebezisuka ezifundeni ezahlukene ebezeseka uMnu Mabuyane.
“NgoMgqibelo ekuseni uMnu Ntutu uthe esifundeni sakhe kunamalunga okungafanele ngabe asengqungqutheleni. Kulawo malunga, ali-14 agcine ekhishiwe engqungqutheleni kwathi ali-10 kuwona angazibuyisa izigqebhezana ebezibavumela ukuba angene,” kusho leli lunga. Okhulumela i-ANC, uMnu Zizi Kodwa, uthe bezingama-80% izithunywa ebezingaphakathi, kwaqhubeka uhlelo lokuvota.
UMnu Mabuyane udle umhlanganiso ngamavoti angama-937 kubavoti abangama-951 abagcine bevotile. Emuva kokudla umhlanganiso, uMnu Mabuyane ugxeke isenzo sokulimala kwabantu kule ngqungquthela. Wethembise ukuthi okwenzekile ngeke kuphinde. “Izinto ezinjena zenza ukuthi siyiANC sigcine sesilahlekelwa wuMasipala iNelson Mandela Bay,” kusho uMnu Mabuyane.